बुहारी चाहिने छोरी किन नचाहिने ? – Ramro Sandesh बुहारी चाहिने छोरी किन नचाहिने ? – Ramro Sandesh
बुहारी चाहिने छोरी किन नचाहिने ?
Posted on March 7, 2020 /4हप्ता अगाडी / 505 Viewed
रमिला खड्का / सिन्धुली
परिवारमा, समाजमा नचाहिने त छोरी मात्रै हुन्छे । नचाहिने भएकाले नै गर्भमै उनको हत्या गरिन्छ । भन्छन् ,छोरा भयो भने मरेपछि काँध हाल्छ, छोरी त पराइ घर जाने जात । समाजमा छोराछोरीमा विभेद धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । छोरालाई जस्तै छोरीलाई पनि आमाले नौँ महिना नै कोखमा राखेकी हुन्छीन्, जन्माउन कष्ट उतिनै हुन्छ । छोराजस्तै छोरीले पनि आमाको दूध खाएर नै हुर्कन्छन् । तर छोरालाई काख र छोरीलाई पाखा कायमै छ । छोरा जन्मिँदा खुशियाली मनाइन्छ भने भोजभत्तेर नै चल्छ, खसी काटिन्छ दुनियाँलाई तामझाम गरेर रमिता देखाइन्छ । तर छोरी जन्मिँदा अधिक जिम्मेवारी, दायित्व बोध हुन्छ अभिभावकलाई । चिन्ता बढ्छ । भविष्यमा हुने खर्चलाई लिएर अभिभावको निधार खुम्चिन्छ, चाउरिन्छ, दिनरात चिन्ताले पिरोल्छ ।
मुखले त औपचारिकता निभाउँछौँः छोरीलाई लक्ष्मीको सम्बोधन गरेर । तर त्यही लक्ष्मी गर्भमा छ भन्ने पत्ता लाग्ने बित्तिकै भ्रुणहत्या गर्न पनि आत्मा मान्छ । हात काँप्दैन । कस्तो कठोर मन ति बाबु आमाको । जन्मिसकेपछि पनी छोरा भन्दा छोरी धेरै कुराले बञ्चित गरिन्छ ।
अचम्म छ । हामीलाई आमा चाहिने, श्रीमती चाहिने, बुहारी चाहिने, दिदी अनि बहिनी पनि चाहिने । प्रेमिका पनि चाहिने । तर छोरी किन नचाहिने रु आमा, बहिनी, श्रीमती, प्रेमिका पनि त कसैका छोरी नै हुन् । यो सोच राखेर छोरी चाहिएन भनेका भए समाज के हुन्थ्यो होला रु
पहाडी क्षेत्रमा पनि ‘छोरा नभएको घर अँध्यारो’ भन्ने उखानै छ । यस्ता परम्परागत मान्यताका कारण पनि गर्भमै छोरी मारेर पनि छोरा जन्माउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् महिलाहरु । तैपनि समाज जननीकै उपेक्षा गर्छ । सकेसम्म छोरीको साटो छोरो नै जन्मियोस् भन्ने चाहना राख्छ ।
छोरी, आमाबुबा आफनो परिवारको हेरविचार, घरको काम र बाहिर जागिरमा पनि अब्बल देखिएकै छन् । मौका पाउनु पर्छ छोरीले मौका । परिवारको साथले छोरासरह समाजमा उत्रन सक्ने छोरीको कमी छैन समाजमा । विमान चालक, सुरक्षा दस्ता, शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारमा पनि छोरीको सफलता खोज्न अब देश, प्रदेश र स्थानीय तहमा यथेष्ट हस्ताक्षर जन्मिइसकेका छन् । राजनीतिमा पनि छोरी पुस्ताको ख्याति उस्तै छ । छोरीसँग किन घृणा र आमाको गर्भमै हुँदा नै परलोक पुर्याँउछौँ रु उसले बाँच्न पाउने अधिकार पनि खोस्छौँ किन रु जबकी छोरीले अस्तित्वका लागि हरेक क्षेत्रमा प्रमाणित गरेको छ ।
भ्रुणहत्या नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन त छ तर पनि अहिले सम्म यस्को विरोधमा कडाइका साथ पालना भएको छैन । छोरीको जन्म योजनालाई सकारात्मक प्रचार प्रसार जरुरी छ । भ्रुणहत्या गर्ने र गराउने कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ । त्यसैले छोराछोरीमा विभेद होइन् बरु हाम्रो समाजले सोच बदल्न आवश्यक छ । छोरीलाई पनि छोरासरह शिक्षादीक्षा दियौँ भने छोरीले पनि सफलताको शिखर चुम्न सक्छे । समाज उँभो लाग्न देश गतिमा हिँड्न छोरीमा विभेद पहिलो शर्त बन्नुपर्छ अब ।
– बिट्स एफएम